China intsimbi ibhulorho kungamampunge mveliso kunye nabenzi | Honghua
Ubhulorho wentsimbi kuhola wendlela kunye nokufakwa
Imisebenzi ephambili e ubuqhetseba imisebenzi yile:
Umhlangano wangaphambi kwendibano ukuwelda
Ukusika kunye neeprofayili
Ukulungiselela kunye nokulungiselela umda
Ukulinganisa kwe abaqinisi
Uvavanyo ulwakhiwo (kunqabile ukwenziwa)
Cwangcisa i-curvature kwii-girders zinokuhlala ngokulula ziikhontrakthi zensimbi. Kananjalo nokuba mnandi ngobuhle kunokusetyenziswa kweebhanti ezijijwe luthotho lwamacandelo athe tye, ii-girders ezigobile kwisicwangciso ziya kwenza lula ukwakhiwa kwee-cantilevers kumgangatho wobude besakhiwo.
Njengokuba kugoso phezulu, isicwangciso sokujika kufuneka ichazwe ngumyili oyisebenzisa ngokucacileyo irediyo yendlela egoso, okanye uthotho lolungelelwaniso.
Ukuziqhelanisa, iflange egobileyo kwindiza yayo iyenziwa, kusetyenziswa izixhobo zokusika ezilawulwa ngokwamanani, njengothotho lwamakhonkco alhe nkqo, ihlala ingekho ngaphezulu kwe-500 mm yeradiyo ukuya kuthi ga kwi-125 m, okanye engekho ngaphezulu kwe-1000 mm kwiradiyo engaphezulu kwe-125 m. Akuqhelekanga ukuba umyili achaze oku.
Egqithileyo Ukuyilwa kwebhulorho yentsimbi kunye nokufakwa
Okulandelayo: Ufakelo lwesakhiwo sentsimbi